Chiellini '' Cristiano Ronaldo Waxay Aheyd Inuu Mar Hore Naga Tago"
HomeWararka CiyaarahaChiellini ” Cristiano Ronaldo waxay Aheyd inuu Mar hore naga Tago”
October 21, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy 0
Difaaca ruug-caddaaga ah ee Juventus ee Giorginio Chiellini ayaa tibaaxay inay layaab ku noqotay ciyaartoyda kooxdooda markii ay Juventus u ogolaatay Cristiano Ronaldo inuu tago oo uu ku biiro Manchester United, laakiin dhamaan dhinacyada ay u fiicnaan lahayd inuu laacibka reer Portugal waqti hore ka tago.
Xiddiga reer Portugal ayaa suuqa iibka oo sii xidhmaya waxa uu ka tegay Juventus oo uu saddex sannadood u ciyaarayay, isaga oo u saxeexay Manchester United heshiis laba sannadood ah, halkaas oo uu bilowgiiba u muuqdo inuu saldhigay oo uu door hoggaamiyenimo ku yeeshay.
Xilliga uu Ronaldo ka tegay Juventus ayaa ahayd waqti aanay xataa beddelkiisa oo fiican kasoo helaynin suuqyada, sababtan darteed ayaanay Chiellini ugu noqotay layaab iyo isaga oo doorbidi lahaa in laacibka reer Portugal uu waqti hore tago.
Chiellini oo waraysi siiyey warbaahinta DAZN ayaa yidhi: “Waxa aanu nimid marxalad xidhiidhkayaga saaxiibtinimo uu gaadhay heer ay ciyaartoyda kooxdu isu sheegeen in Ronaldo u baahan yahay goolal cusub, sababtoo ah waa u muhiim inuu helo koox sidaas ah. Horumar ayuu samaynayay bilihii ugu dambeeyey, annagana wuu noo muujinayay.
“Halkan Juventus, waxa dib uga bilaabmay barnaamujka dibu-cusboonaysiinta. Haddii Ronaldo uu sii joogi lahaa, qiime kale ayuu kusoo kordhin lahaa, laakiin waa caadi inuu aad uga fikiray waqtigan iyo mustaqbalkaba.
“Wuxuu naga tegay August 28, way noo fiicnaan lahayd haddii uu waqti hore tegi lahaa, sababtoo ah layaab ayay nagu noqotay. Haddii uu waqti hore naga tegi lahaa, waxaanu heli lahayn waqti aanu isku diyaarino.”